Tix Gabay ah oo la yidhaahdo DUCO” Saleban Cabdi Cali (Kalshaale) – Araweelo News Network (Archive)
Tixdan Gabayga ah waxa la yidhaahdaa Duco waxaanay soo baxday 1 Bishii 01/12/2012, waxaanay ka hadlaysaa wacyi-ga siyaasadeed ee Somaliland maanta ka jira iyo dareenada kala gedisan ee ka soo bu’aya aragtida Bulshada.
Tixdani waxay u digaysaa dulmi wade, diraysaa fariin dedan iyo dul wax ugu sheeg huwan oo ku socota inta damaca siyaasada ku legdamaya wali ee aan kala bixin iyo kuwa lagu dul loolamayo.
Hadaba waxay Tixda Duco ku Bilaabantay sidan soo socotee akhris wacan iyo wax ku qaadasho ayaa idinku waajiba walaalayaal.
Allahayoow adaa deeqsiyoo Duunka Maamule
Adigaa Diraacdiyo Gugiyo Dayrta Roob shuaba e
Adigaa Dabaylaha dhiciyo Duusha Noolaha e
Ducadayda ii Yeel rabow Daayin baad tahay.
Nabad Durugsan Deel qaaf la’aan Daacadnimo Waarta
Dadkoo wada jiroo Daalin neceb Diiday yidhi kii Xun
Dakhar li’ , dareen wada jiriyo Duul is-jecel Maanta
Daruur curatay oo lagu degsado Doogna laga dheefo
Allahayoow dalkaygiyo ka yeel Dunida Guudkeeda.
Dugsi nabada Deegaan Nimco leh Dirir la’aan Waarta
Derejiyo Hufnaan iyo daryeel dad isu quudhaaya
Oo aan isdiidayn hadii xaajo yara duugto
Dibin-daabyo eeboow ka dhawr daahirbaa tahay
Dumarkiyo Caruurtii Doraad Dibada meeraayay
Iyo Doorkan kuwa soo kacee Daaha rogay waaga
Na difaac Raxmaanoow hadii nalugu soo duulo
Na dawee allohayoow hadii Dakhar na soo gaadho.
Dibnahayga waxa furay Dareen Doorka ii yimiye.
Dabaylaha dhacaayiyo danbaa daartay Feedhaha’e
Dadweynaha kashkoodaa hadeer duubka ii xidhay
Anigoon daraasayn ayaan deel la soo kacaye
Raga damacu daadihinayoow dib jaleec Heelka
Dabkaa shidan Danlaydiyo dalkuba adiga Doorkaaye
Dil-dilaaca hoosiyo ka dhawr Daalinkiyo weerka.
Afartaa dareenkaan qabiyo Duco iyo Duugaal dheh
talo dedan halkay daarantahay Dul wax ugu sheegeed dheh
afar kalena doocaan qabo aan ka rogo diirka
hadii Derejo lagu loolamoo Libintu Duul raacdo
ama duul midkii talin lahaa Daahir lagu doorto
dad tartamay Dareenbaa ku ladhan diida Xaajada
raga doorkan loolamay ayaan deexda leeyahay
daraasiin badhkiina dushiyo Guusha Daabacane
inta kalena Doorbay u hadhi Calafku Dooraaye
Dul u yeesha waxa soo baxoo yaan la dacaroonin.
Isma dooranoo waad ogtiin waase Ducanaaye
Diilimaha Cadaan iyo Madoow dulucdu weeyaane
Dacwad kii qabow Golaha gee Dooda la arkaaye
Ha yeeshee dalkaagiyo dadkaba Dirir gaadhsiinin
Sed Dur-duura ha u dilin xalaal duhur la quutaaye
Doc kastaba ka dhawraay dadyahow Qaranku waa Duuge
Duufaan Ninkii hurinayiyo kii wax kale dooni
Labada dadweynoow dagaal diidnay dheha Maanta.
Fadlan igamay ahayn inaan Gabyo ee waxa Laabta Kiciyay dheg ka maqalka wixii igu soo gaadhayay,